Football Khabar » कोपा अमेरिका : निर्णायक खेलमा आज चिली–उरुग्वे र इक्वेडर–जापान भिड्दै !
कोपा अमेरिका : निर्णायक खेलमा आज चिली–उरुग्वे र इक्वेडर–जापान भिड्दै !
ब्राजिलमा जारी कोपा अमेरिका फुटबल प्रतियोगितामा आज राति समूह चरणका अन्तिम दुई खेल हुँदैछन् । समूह ‘सी’अन्तर्गत आज हुने दुई खेलपछि क्वार्टरफाइनलको समीकरण पनि पूरा हुनेछ ।
आज एक खेलमा साबिक विजेता चिली र उरुग्वे एक खेलमा भिड्दा अर्को खेलमा इक्वेडर र जापान भिड्दैछन् । यी दुवै खेल नेपाली समयअनुसार आज राति एकै समय बिहान ४ः४५ बजेबाट बजेबाट सुरु हुनेछन् ।
चिली यसअघि नै २ खेल जितेर क्वार्टरफाइनल पुगिसकेकाले उसका लागि यो खेललाई हार–जितले ठूलो फरक पार्नेछैन । त्यसैगरी, उरुग्वे पनि अन्तिम आठमा जान सहज अवस्थामै रहेकाले यो खेल हारे पनि उसलाई समस्या पर्दैन । चिलीसँग हारे पनि उरुग्वे शीर्ष दुई वा उत्कृष्ट दुईमै रहेर अर्को चरण जानेछ ।
हाल अंक तालिकामा चिली ६ अंकसहित शीर्ष स्थानमा छ भने उरुग्वे ४ अंकसहित दोस्रो स्थानमा छ ।
आज हुने दोस्रो खेलमा जापान र इक्वेडर भिड्दा जापान दबाबमा हुनेछ । हाल १ अंकसहित तेस्रो स्थानमा रहेको ऊ आजको खेल जितेर अर्को चरण जाने दाउमा छ । तसर्थ, आज नकआउट चरणको सम्भावना बढाउन जापानले इक्वेडरलाई हराउनैपर्छ । यदि ऊ हारे वा बराबरीमा रोकिए उसको अन्तिम आठको यात्रा संकटमा पर्नेछ ।
समूह चरणअन्तर्गत तीन समूहबाट शीर्ष दुईमा रहने टोली सोझै अन्तिम आठमा पुग्नेछन् । बाँकी दुई टिमलाई भने तीनवटै समूहबाट तेस्रो स्थानमा रहेका तीन टिममध्ये अंक र गोलअन्तरमा अघि रहने दुई टिमले अर्को चरणमा प्रवेश पाउँछन् ।
प्रकाशित मिति ९ असार २०७६, सोमबार ०४:५८